Siciid Deni oo markale Dubai kula kulmaya mas'uuliyiinta DP World | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Siciid Deni oo markale Dubai kula kulmaya mas’uuliyiinta DP World
Siciid Deni oo markale Dubai kula kulmaya mas’uuliyiinta DP World
Shirkadda DP World, waxay Dekedda Boosaaso kula wareegtay heshiis la saxiixay 6-dii April 2017, kaas oo Baarlamanka Puntland ansixiyay 27-kii July ee isla sannadkaas.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxa shirkadda DP World Suldaan Axmed Bin Suleyman, ayaa xilligaas qalinka ku duugay in DP World ay mudda 30-sano ah maamusho Dekedda Boosaaso.
Nuxurka Heshiiska wuxu ahaa, in laba sannadood gudahood ah Shirkaddu ballaarin iyo casriyayn ku samayso Dekedda, islamarkaana lagu kordhiyo 450 mitir oo ballac ah, taas oo ay ku baxayso lacag dhan $336 malyan oo Dollar.
Mudadii Heshiiska ku qornayd in Dekedda lagu dhiso ayaa dhammaatay 6-dii April 2019, iyadoo aysan jirin wax shaqo ah oo laga qabtay dhismaha iyo ballaarinta Dekedda Boosaaso.
Waxa xusid mudan, in 4-tii February 2019 Boosaaso lagu dilay Madaxii P&O Ports, oo DP World u qaabilsan Dekedda Boosaaso, kaas oo ay dilkiisa sheegatay Al-shabaab.
15-kii April 2019, Madaxweyne Deni oo safar ku tegay magaalada Dubai ayaa halkaasi kula kulmay Madaxa Shirkadda DP World, Suldaan Axmed Bin Suleyman, kaas oo ballan-qaaday dardar gelinta dhismaha Dekedda.
Ha yeeshee, sannad iyo lix bilood kadib waxba kama fulin ballan-qaadkaas, waana sababta keentay in mar kale Madaxweyne deni doonayo in uu la kulmo Mas’uuliyiinta DP World,si looga wada-hadlo Arrinta Dekedda.
Maqaal horeSawirro: DF oo dhagxaanta ka qaaday jidadka qaar ee Muqdisho
Maqaal XigaDad badan oo ku dhintay xeebaha dalka Jabuuti